राष्ट्रिय परिचय–पत्र : बोक्नकै लागि मात्रै बितरण « Phidim Today
BSC FM live
राष्ट्रिय परिचय–पत्र : बोक्नकै लागि मात्रै बितरण
Published on: 13 August, 2019 7:42 am
टुडे संवाददाता/ पाँचथर, २८ साउन
२०७५ साल मंसिर पहिलो साताबाट ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा बितरण सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण अन्तरगत अहिले सम्म ५८ हजार एक सय ५८ जना पाँचथरका नागरिकले परिचयपत्र लिइ सकेका छन । जिल्लामा हालसम्म बिवरण दर्ता भएका ८६ हजार ५ सय २८ जना मध्ये त्यतीको संख्याका नागरिकले कार्ड पाएका हुन । बिवरण संकलन भएर पनि अहिले सम्म २४ हजार ९ सय ४४ जनाको काड थन्किएको छ । बिवरण दिएर पनि ३ हजार ४ सय २६ जनाको काडए आउनै बाँकी छ ।
पहिलो चरण अन्तरगत पाँचथर जिल्लाका नागरिक र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई परिचयपत्र बितरण गर्ने तयारी अनुसार काम पुरा भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र ब्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण बिभागका सुचना अधिकारी शिवराज जोशिले जानकरी दिए । उनका अनुसार यो प्रोजेक्टको कुल लगानी साढे ५ अर्व हो । त्यस मध्ये हाल सम्म ४९ करोड रकम खर्च भइसकेको छ ।
कार्डमा ब्यक्तिका जैबिक र ब्यक्तिगत बिवरण समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । हाल बिवरण संकलन भइरहेको कार्डमा ब्यक्तिगत बिवरण र जैबिक बिवरणलाई पहिलो चरणमा स्थान दिन लागिएको छ । ब्यक्तिगत बिवरणमा कार्ड पाउने ब्यक्तिको नामथर, पारिवरीक अवस्था लगायतका बिवरण समाबेश हुन्छ भने जैबिव बिबरणमा हातका दश वटै औलाको छाप, फोटो लगायतका बिवरण समाबेस गरिएको छ ।
यसमा अन्य बिवरण थप गर्दै लैजाने तयारी सरकारको छ । नेपालको नागरिकता लिएका र लिन उमेर पुगेकाहरुका लागि गरेर दुई तरिकाबाट कार्ड बितरणको गरिएको छ ।
यो कार्ड अहिले सम्म कहिँ कतै पनि बिवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा प्रयोग भएको छैन । यो पाइलट प्रोजेक्ट मात्रै भएका कारण देशभर सबैका हातमा पुगे पछि यसको अध्ययन गर्न सक्ने मेसिनको ब्यवस्था हुने पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले बताए । तत्काल कार्ड अध्ययन गर्न सक्ने मेसिन राख्ने कुनै तयारी नबुझिएको उनले बताए । सबै नागरिकका हातमा कार्ड पुगे पछि त्यस पछिको चरणमा मेसिन राख्ने हो । उनले भने–पाँचथरको हकमा सदरमुकाम सहितका बजार क्षेत्रमा आवस्यकता हेरेर कार्ड अध्ययन गर्न सक्ने मेसिन राखिने छ ।
सबैको हातमा कार्ड नपुगेका कारण हालका लागि मेसिन नराखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्तीले बताए । मेसिन राख्न बजेट भन्दा पनि केन्द्रिय नीतिको एकरुपता पहिलो सर्त हो । केन्द्रले राख्ने भन्ने निर्णय लिने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा राखिने बताए ।
जिल्लामा बाँडिएका परिचय पत्र पनि प्रयोग बिहिन अवस्थामा छन । परिचय पत्र लिएको ६ महिनामा पनि कुनै ठाउँमा प्रयोगमा नआएपछि आफुले साथमा राख्नै छोडेको फिदिमका ब्यवसायी सन्तोष श्रेष्ठले बताए । यो त काम नलाग्ने पो हुँदो रहेछ । राष्टिय परिचय पत्र लिईयो भनेर मख्ख परेको कहीँ कतै काम लागेन । उनले भने–अहिले त बोक्न पनि छोडेँ । कार्ड भित्र के सुचना छ भन्ने पनि अहिले सम्म जानकारी नभएको उनले बताए । के मा लगाएर हेर्नु र जानकारी हुनु ? उनको प्रश्न छ ।
कार्ड लिएको लामो समय भए पनि प्रयोगमा भने नआएको स्थानीय देबीप्रसाद न्यौपानेले बताए । एकपटक प्लेन चड्दा परिचय पत्र भनेर मागेथ्यो । उनले भने–त्यतीखेर देखाएको बाहेक कुनै कामै लागेको छैन । जिल्लामा कार्ड लिन सबैको भनाई यस्तै छ ।
गत बर्ष ठुलै तामझामका साथ गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पहिलो पटक पाँचथरमा फिदिम ४ कि एक सय एक बर्षिय भगवतिदेबी भण्डारीलाई कार्ड प्रदान गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । स्वयम गृह मन्त्री थापाले पनि बृद्धा भण्डारीबाट कार्ड लिएका थिए ।
जुन तामझामका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण थालियो त्यसको उपयोगिता नभए पछि कम महत्वको देखिन थालेको छ । अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कार्ड लिन चाहानेहरुका लागि बिवरण संकलनको कार्य भईरहेको राष्टिय परिचयपत्र ब्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण बिभाग फिल्ड कार्यालय पाँचथरका कम्प्युटर अपरेटर भेषराज खत्रिले जानकारी दिए ।
उप–निर्वाचन – ९ दलका २१ उम्मेद्वारको मनोनयन
खुम्बु क्षेत्रमा फ्रान्सेली पर्यटकको मृत्यु
सीमाना नै नदेखीकने फर्कन्छन ताप्लेजुङका अधिकांश सीमा प्रहरी
आलम प्रकरणमा फेरिन थाल्यो प्रत्यक्षदर्शीको बयान, ‘बम होइन स्टोभ पड्केर घाइते भएँ’
अष्ट्रलियामा संकटकाल घोषणा
सीमास्तम्भ नहुँदा दसगजा अतिक्रमण
बिग सोसियल कम्युनिकेशन प्रा. लि द्धारा सन्चालित
फिदिम टुडे अनलाइनका लागि
अध्यक्ष : सानुकाजी यथार्थ
प्रकाशक :- दिपक बाेहाेरा
प्रबन्धक :- सराेज शर्मा
प्रधान सम्पादक :- सुरमान तामाङ
सम्पादक :- गिरिराज बाँस्काेटा
बिग सोसियल कम्युनिकेशन प्रा. लि द्धारा सन्चालित फिदिम टुडे फिदिम पाँचथर नेपाल
सम्पर्क नंबर: +977 9852684015
इमेल ठेगाना : [email protected] [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. :
All rights reserved by phidimtoday.com
By : appharu.com